‘प्रेम गीत ३’ अभिनेत्रीका लागि अडिसन आह्वान, कस्ले मार्ला त बाजि ? - Rojgar Manch
‘प्रेम गीत ३’ अभिनेत्रीका लागि अडिसन आह्वान, कस्ले मार्ला त बाजि ?
मङ्लबार, २४ बैशाख, २०७६
आसुसेन फिल्मको ब्यानरमा निर्माण हुने फिल्म ‘प्रेम गीत ३’को मुख्य अभिनेत्रीको लागी अडिसन आह्वान गरिएको छ ।
फिल्मका निर्माता सन्तोष सेनले राम्रो अभिनेत्री फिल्म उद्योगमा प्रबेश गराउने सोंचका साथ अडिसन आह्वान गरिएको जानकारी दिए । उनले संसारभरबाट अडिसनका लागि सहभागी हुन सक्ने बताए ।
निर्माता सन्तोष सेन र छेतेन गुरुङको संयुक्त निर्देशन रहने फिल्मको मुख्य अभिनेत्री बन्न चाहनेहरुले आसुसेन फिल्मको अफिसियल साईट www.aasusenfilms.com मा गएर फर्म भर्न सक्नेछन् अथवा आसुसेन फिल्मको ईमेल [email protected] मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।
अभिनेत्री बन्न चाहाने ईच्छुकका लागि केही शर्तहरु पनि लागू गरिएको छ । जसअन्तर्गत ईच्छुकले अनुहार स्पष्ट देखिने हालसालै खिचेका ४ वटा तस्वीर र आफ्नो बायोडाटा पठाउनुपर्नेछ । साथै, उचाई ५ फिट २ देखी ५ फिट ७ ईन्चसम्म हुनुपर्नेछ ।
आवेदन आएकाहरुमध्येबाट २० जनालाई फाइनल अडिसनका लागी छानिनेछन् । उनिहरुमध्ये एक जना मुख्य अभिनेत्रीमा छनोट गरिनेछ । ईच्छुकले आगामी जेठ १० गतेसम्म सम्पर्क गरिसक्नुपर्ने निर्माता सेनले बताएका छन् ।
निर्माण टिमले यसअघि थिम पोष्टर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति तय गरिसकेको छ । फिल्म वर्षको अन्तिम अर्थात चैत २८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउनेछ । ‘प्रेम गीत ३’ आसुसेन फिल्मको पाँचौं प्रोजेक्ट हो ।
निर्माण टिम झण्डै एक वर्षदेखी स्क्रिप्टको काम गरिरहेको टिमले अहिले त्यसलाई फाइनल गर्ने तयारीमा छ । अभिनेत्री र मुख्य कलाकार छनोटको काम सकिएपछि विशेष कार्यक्रमकाबिच फिल्मको आधिकारिक घोषणा गर्ने आसुसेन फिल्म प्रोडक्सन कम्पनीले जनाएको छ ।
फिल्ममा अभिनेता प्रदीप खड्का भुमिकामा रहने चर्चा रहेपनि निर्माण टिम यसबारे आधिकारीक बोलेको छैन् ।
बियोगान्त कथा बोकेको गीत “कालो बादल” सार्वजनिक
अमेरिकामा तामाङ निर्देशित नेपाली डकुमेन्ट्रीले जित्यो दुईवटा अन्तराष्ट्रिय अर्वाड
किरणको ‘सांईली’ लोक दोहोरि गीत सार्वजनिक
अन्तर्राष्ट्रिय कान्स भिडियो फेस्टिबलमा ‘सहायक श्रीमान’ले जित्यो प्रथम पुरस्कार
बसन्त सापकोटा र रचनाको नयाँ गीत ‘सुनन पियारी’ सार्वजनिक (म्यूजिक भिडियोसहित)
‘सिन्धुलिको जुनारै रसिलो’ लोक दोहोरि गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
अर्जुन र राजेशपायलको ‘त्यो तिमि हौ’मा दयाहाङ र आँचलको रोमान्स